Muxuu Mikel Arteta ka yiri guushii weyneyd oo kooxdiisa Arsenal ka gaartay West Brom?? – Gool FM
Muxuu Mikel Arteta ka yiri guushii weyneyd oo kooxdiisa Arsenal ka gaartay West Brom??
Dajiye January 3, 2021
(London) 03 Jan 2021. Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guusha weyn oo ay kooxdiisu kaga gaartay West Bromwich Albion kulankii ka tirsanaa Horyaalka Ingiriiska.
Arsenal ayaa guul raaxo leh ka soo heshay kooxda West Bromwich oo ay ku booqatay garoonkeeda The Hawthorns, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-4, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Macalinka reer Spain ayaa kaddib markii ay ciyaarta dhamaatay wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan awoodnay inaan gaarno ujeedkeena.”
“Jadwalka kala saraynta ayaa umuuqda mid aad u kala duwan.”
Mikel Arteta oo wiilashiisa la gaaray guushii saddexaad oo xiriir ah, kaddib natiijooyin xun oo is xigxigay ayaa wuxuu yiri:
“Guuluhu waxay siineysaa kooxda kalsooni, waxaadna ku arki kartaa taas qaabkii ay kooxdu u ciyaartay.”
Kooxaha Chelsea, Man City, Barcelona, Juve, Inter, Milan, Bayern Munich & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono horyaallada waa weyn ee Yurub
“Waa seddex dhibcood oo aad muhiim u ah.” Zidane oo ka hadlay guushii ay ka gaartay Celta Vigo